Midowga Musharixiinta oo shuruud adag hor-dhigay Ra'iisul Wasaare Rooble - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo shuruud adag hor-dhigay Ra’iisul Wasaare Rooble
Afhayeenka Midowga Musharixiinta Musharax Daahir Maxamed Geelle ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, Shirka wadatashiga doorashooyinka ee ka furmaya Magaalada Muqdisho iyo isbedelda ka dhacay.
Afhayeenka oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa marka sheegay in Midowga Musharixiinta ay rtaageersan yihiin hanaanka uu Ra’iisul Wasaare Rooble kula wareegay doorashada ayna la Shaqeeynayaan.
Sidoo kale Musharax Daahir Geelle ayaa ka dalbaady Ra’iisul Wasaaraha in aragtidiida uu ku muujiyo in hogganka uusan kala gedisneyn balse kaliya aragtida ay kala gedisan tahay, sidoo kalena Shirka 20-ka Bisha May uu gundhigiisu noqdi heshiiskii 17-kii September.
Afhayeenka Midowga Musharixiinta Musharax Daahir Maxamed Geelle ayaa sidoo kale sheegay in shirka wadatashiga doorashooyin uu noqdo mid loo wada dhan yahay oo ay ka qeyb galaan, Midowga Musharixiinta, Beesha Caalamka, Ururrada Bulshada Rayidka ah iyo cid kasta oo kasoo Shaqeeyay dowladnimada Soomaaliya.
Ugu dambeyn Afhayeenka Midowga Musharixiinta Musharax Daahir Maxamed Geelle ayaa waxaa ka hadlay warar lagu faafinayay Baraha Bulshada ee ku aadanaa in uu khilaf soo kala dhex-galay Midowga Musharixiinta, waxana uu sheegay in Musharixiinta ay yihiin kuwo Mideysan.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo ka hadashay wararka sheegaya in Somalia & Kenya ka heshiiyeen kiiska Badda
Next articleGuddiga baarista Carruurtii lagu dilay Baydhabo oo War soo saaray